Ezekieri 10 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
10 Zvino ndakaramba ndichiona, uye tarira! panzvimbo huru+ yakanga iri pamisoro yemakerubhi paiva nechimwe chinhu chakaita sedombo resafaya,+ chakanga chakafanana nechigaro choumambo,+ chaioneka pamusoro pawo. 2 Iye akati kumurume akanga akapfeka nguo yerineni:+ “Pinda pakati pemavhiri anotenderera,+ pasi pemakerubhi, uzadze zvanza zvemaoko ako ose nemazimbe+ omoto ari pakati pemakerubhi, uamwaye pamusoro peguta racho.”+ Naizvozvo iye akapinda ini ndichizviona. 3 Zvino makerubhi akanga akamira kurudyi rweimba pakapinda murume wacho, uye gore rakanga richizadza chivanze chomukati.+ 4 Kubwinya kwaJehovha+ kwakakwira kuchibva pamakerubhi kuchienda kuchikumbaridzo cheimba yacho, zvishoma nezvishoma imba yacho yakazadzwa negore,+ uye chivanze chakazadzwa nokupenya kwokubwinya kwaJehovha. 5 Kutinhira kwemapapiro emakerubhi+ kwakanzwika kuchivanze chokunze, sezvinoita inzwi raMwari Wemasimbaose paanotaura.+ 6 Zvino paakarayira murume akanga akapfeka nguo yerineni, achiti: “Tora moto uri pakati pemavhiri anotenderera, uri pakati pemakerubhi,” iye akapinda, akamira pedyo nevhiri. 7 Kerubhi rakabva ratambanudza ruoko rwaro ruchibva pakati pemakerubhi ruchienda kumoto+ wakanga uri pakati pemakerubhi,+ rikautakura, rikauisa muzvanza zvomurume akanga akapfeka nguo yerineni,+ uyo akabva autora, akabuda. 8 Zvino pane chinhu chakaita soruoko rwomunhu chakaonekwa chaiva pamakerubhi pasi pemapapiro awo.+ 9 Ndakaramba ndichiona, uye tarira! paiva nemavhiri mana aiva pedyo nemakerubhi, vhiri rimwe chete riri pedyo nekerubhi rimwe chete uye vhiri rimwe chete riri pedyo nerimwe kerubhi,+ uye kutaridzika kwemavhiri acho kwakanga kwakaita sokupenya kwedombo rekrisoriti. 10 Kutaridzika kwawo, iwo mavhiri acho mana kwakanga kwakafanana, sezvinongoita vhiri kana riri mukati merimwe vhiri.+ 11 Paaifamba, aienda kumativi awo mana. Akanga asingachinji kwaainge akananga paaifamba, nokuti aienda kwainge kwakatarira musoro. Akanga asingachinji kwaainge akananga paaifamba.+ 12 Miviri yawo yose nemisana yawo nemaoko awo nemapapiro awo nemavhiri acho zvakanga zvizere nemaziso kumativi ose.+ Ose ari mana aiva nemavhiri awo. 13 Ndakanzwa mavhiri acho achishevedzwa kuti, “Haiwa mavhiri anotenderera!” 14 Rimwe nerimwe raiva nezviso zvina.+ Chiso chokutanga chaiva chiso chekerubhi, chiso chechipiri chaiva chiso chomunhu wepanyika,+ chechitatu chaiva chiso cheshumba, uye chechina chaiva chiso chegondo.+ 15 Zvino makerubhi acho aikwira+—icho chakanga chiri chisikwa chipenyu chiya chandakanga ndaona parwizi rwaKebhari+— 16 uye makerubhi paaifamba, mavhiri acho aifambawo ari pedyo nawo;+ uye makerubhi paaisimudza mapapiro awo kuti akwire kumusoro kwenyika, mavhiri acho aisachinja kwaainge akananga, ari pedyo nawo.+ 17 Paaimira, iwo aimirawo; uye paaisimuka,+ iwo aisimukawo pamwe chete nawo, nokuti mudzimu waishanda pachisikwa chipenyu waiva mukati mawo.+ 18 Zvino kubwinya+ kwaJehovha kwakabva pachikumbaridzo cheimba, kukanomira pamusoro pemakerubhi.+ 19 Makerubhi acho akabva asimudza mapapiro awo, akasimuka achibva panyika+ ndichizviona. Paakafamba, mavhiri achowo akanga ari pedyo nawo; uye akanomira pasuo rokumabvazuva regedhi reimba yaJehovha, uye kubwinya kwaMwari waIsraeri kwaiva pamusoro pawo, nechokumusoro. 20 Ichi ndicho chisikwa chipenyu+ chandakanga ndaona chiri pasi paMwari waIsraeri parwizi rwaKebhari,+ zvokuti ndakaziva kuti aiva makerubhi. 21 Ose ari mana, rimwe nerimwe raiva nezviso zvina+ uye rimwe nerimwe raiva nemapapiro mana, uye zvinhu zvakaita semaoko omunhu wepanyika zvaiva pasi pemapapiro awo. 22 Zviso zvawo zvakanga zvakaita sezviso zvandakanga ndamboona pedyo norwizi rwaKebhari, zvakanga zvakaita saizvozvo chaizvo.+ Kerubhi rimwe nerimwe raifamba rakananga mberi.+